I-12 eyoyikisayo yesamsung inqaku lenqaku le-3
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-12 eyoyikisayo ye-Samsung Galaxy Qaphela iimeko ze-3
I-12 eyoyikisayo ye-Samsung Galaxy Qaphela iimeko ze-3
I-Galaxy Note 3 iye yaba yenye yezona zinto zithengiswa kakhulu yi-Samsung ngesizathu esivakalayo- izisa eyona nto iphambili kwezixhobo zekhompyutha kwi-phablet eyi-5.7 eyakhiwe kakuhle. Ngaso sonke esi sihlunu sixabisekileyo sehardware, nangona kunjalo, unokufuna ukukhusela kangangoko kunokwenzeka. Ukukhuphela i-Galaxy yakho 3 ngetyala elimnandi nelomeleleyo kunokuyigcina ikwimeko entle, kwaye kukuncede ugcine elona xabiso liphezulu lokuthengisa wakugqiba ukuba lixesha lokuphucula. Ngaphaya koko, imeko efanelekileyo inokukhusela umboniso omkhulu we-5.7 ”ekuphazanyisweni nasekuweni.
Ukukhuselwa, nangona kunjalo, ayisosizathu sodwa sokufumana ityala okanye isigqubuthelo seNqaku 3. Kuyinyani ukuba i-Samsung itshintshe ulwimi kuyilo lwayo ngokufaka isikhumba senkohliso emva kwiNqaku 3, isinika ukubonakala okupolishiweyo, uthini malunga nabo bafuna umbala omncinci ngakumbi kwiNqaku labo le-3? Ukutshintsha ikhava yangasemva kunokuba sisisombululo esinexabiso eliphantsi nesilula kuloo nto, kwaye zininzi kakhulu ii-bumpers ezijongeka zingenakongeza ukhuselo kuphela, kodwa kunye nombala onomdla kwi-phablet.
Siye sakhetha ishumi elinambini lamatyala ethu athandwayo eGlass Note 3 kunye nezembozo ezenza konke oku ngasezantsi. Siyayikhaba ngamatyala avela kubenzi abaziwayo abanjengo-OtterBox kunye ne-Spigen, kodwa ungathandabuzi ukujonga abo bakwinqanaba lesibini abalandelayo-benzelwe ngokukodwa iNqaku 3, kwaye beza ngaphandle kwamaxabiso aphezulu . Okokugqibela, gcinani engqondweni ukuba onke amatyala ongeze isambuku senqaku esele likhulu-lixabiso ekufuneka ulihlawule kolo khuseleko longezelelekileyo. Ngaphandle kokuqhubeka, jonga kukhetho lwethu lwamatyala amakhulu amaNqaku ama-3.
1. I-Spigen Bounce- i-10.99 yeedola
Ubuncinci, ubuhle kunye nexabiso eliphantsi leSpigen Bounce liza nepateni eyahlukileyo kunye nokulunga okumnandi, okuhle kwabo bafuna ityala ngaphandle kwesambuku esongezelelweyo. Yenziwe ngobunono obuthambileyo kunye nokubambeka okungahambiyo, okungatyibilikiyo.
Mbini. Qalisa i-DualPro- $ 22
Elinye ityala elincinci, i-Incipio DualPro yongeza ukhuselo ngakumbi ngomzimba wokhuselo kunye ne-flare yoyilo lwemibala emibini.
3. Isimbozo sokujonga i-Samsung S- $ 50
Isamsung ye-Samsung kunye neapos eyakhe yokujonga ikhava izisa ezona zimbini zehlabathi-ukhuseleko kunye nokubonakala. Ifaka iNqaku 3, kodwa ishiya ifestile encinci kwiphepha elingaphambili, ukuze ubone ixesha kunye nezaziso eziphosiweyo ngaphandle kokuvula ityala.
Isimbozo sokujonga i-Samsung S
Zine. Umkhweli weOtterbox- $ 45
Umkhweli weOtterbox usenokungabi phakathi kweyona micimbi icekeceke, kodwa ibetha ibhalansi elungileyo phakathi kukhuseleko oluqinileyo kunye nobukhulu obufanelekileyo. Ineeplagi zesilicon ezigubungela onke amazibuko kwaye ibonelela ngokhuseleko olukhulu ngokubanzi ngokuchasene namathontsi.
5. I-Aegis eTrident- $ 30
I-Trident Aegis iqinisekisiwe njengobungqina bokothuka, ukumelana nokuvavanywa kwe-drop (inokuphila ngamathontsi angama-26 ukusuka kwiinyawo ezi-4), kunye nokufumana imiphetho eqinisekisiweyo yokukhusela okungcono. Amacala ayo aphakanyiswe kancinci ngaphezulu komboniso wokhuseleko olongezelelweyo.
6. I-CandyShell ekhethiweyo- $ 40
Ngeepads zayo ezikhethekileyo zeminwe, i-Speck CandyShell yenza kube lula ukuba ubambe i-godo kwiNqaku lakho le-3, kunye nale yinto eyenza ukuba kube nzima isixhobo ukuba sikhuphe iinyawo zakho. Uyilo olwahlukileyo, imibala emitsha, kunye nokukhuselwa okufanelekileyo okubonelelwa leli tyala kwenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokucinga.
7. Isixhobo seArmor Gear Aero- $ 35
Isixhobo se-Urban Armor sizisa izixhobo zayo ze-'Aero 'zeNqaku le-3 elingayiniki nje kuphela ukubukeka okufana nokuguqulwayo okuzayo, kodwa kunye nesixa esiqinisekileyo sokhuselo.
Isixhobo seArmor Gear Aero
Impazamo yesilayidi: isilayidi 4 ngaphandle komfanekiso kwaye akukho thegi yokungena!
9. IWatson Folio Wallet- $ 45
Ngaba unayo malunga nokushiya isipaji sakho ekhaya? Ukuba wenza ivenkile yakho usebenzisa amakhadi etyala okanye okuthenga ngetyala, ityala likaWatson & Apos; s I-Folio Wallet yeNqaku 3 lingakunika indawo eyaneleyo eyaneleyo yamaxwebhu akho abalulekileyo, kwaye unokwazi nokufaka amaphepha ambalwa wephepha kwelinye lamatyala & apos; s iipokotho. Ucocekile, ayisiyo & apos; akunjalo?
IWatson Folio Wallet
Ityala le-Spigen & apos; s Hybrid likhusela iNqaku lakho lesi-3 kwaye longeza umbala onesitayile ecaleni kwaso. It is a like a bumper, kwaye abo banqwenela umbala omncinci ngakumbi kwiNqaku 3 banokuyithanda.
Imeko yeSpigen Neo Hybrid
Shumi elinanye. Umkhuseli weOtterBox- $ 60
Kuyinyani ukuba onke amatyala ayakhusela, kodwa iOtterBox Defender yintshatsheli kwezokhuseleko. Usenokuba uyadlala i-frisbee ngeNqaku lakho le-3, kwaye usenalo ukusinda kumathontsi amaninzi. Oko kuza kutshintshiselwano oluninzi oluninzi, nangona kunjalo, gcina oku engqondweni.
12. IBelkin Shield Sheer- $ 30
I-Belkin Shield ecekeceke yindlela efikelelekayo yokutshintsha ukubonakala kweNqaku 3, kwaye isakhuselekile.
IBelkin Shield Sheer
13. Isikhuselo seRocketfish Snap - $ 23
Ukuba ulusu oluyinyani ngasemva kweNqaku 3 lukhe lwaphela, ungasoloko uyibeka endaweni enoqweqwe lweRocketfish.
Isikhuselo seRocketet Snap
14. UFintie Yakha kwiKickstand Case- $ 9
Inye kuphela into iNqaku 3 elingenayo (kwaye ngekhe sayithanda) kukukhaba. Ityala likaFintie liyongeza ukuze ukhabe umva, uphumle kwaye ubukele imovie ngaphandle kokubamba ngesixhobo isixhobo kangangeeyure.
UFintie Yakha kwiKickstand Case
Uwasebenzisa njani amaqhosha evolumu ukusnuza okanye ukugxotha ii-alamu (i-Android)
Iimodyuli ze-LG G5: ukujonga ngokusondeleyo
Ezona ndlebe ziyinyani zingenazingcingo
Imeko yekhibhodi yeLogitech yohlobo lwe-S yoVavanyo lweS Samsung Galaxy Tab S 10.5
I-PS4 Remote Play ibaleka i-Xperia entolongweni, kodwa iDualShock yakho iya kudibana kuphela kwi-Android 10
I-Walmart ine-Apple & apos; s 6th Gen iPad kwintengiso ngesaphulelo esikhulu ngaphandle kwamathandabuzo
Uvavanyo lobomi bebhetri le-Samsung Galaxy Note 3: i-monster kwiingubo ze-faux-leather